Drafitr’asa Kazan: hitondra zava-baovao ho an’ny Spaoro Afrikanina | NewsMada
Hatolotra hodinihin’ireo minisitra afrikanina miisa 20 mianadahy, anio, ilay drafitr’asa Kazan, novolavolain’ny manam-pahaizana manokana 80 avy amin’ny firenena 37. Drafitr’asa hanovana endrika ny fanatanjahantena aty Afrika, tafiditra amin’izany ny fampandrosoana anatin’ny fahasalamana sy ny fandriampahalemana, fanafoanana ny fanilikilihana ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ary ny fampitoviana zo ny lahy sy vavy, eo amin’ny fanaovana fanatanjahantena. Omaly, nandritra ny lanonam-panokafana ny fivoriambe rezionaly voalohany, natokana ho an’ireo minisitra afrikanina, ho amin’ny fanatanterahana aty afrika ilay drafitrasa Kazan(PAK), nisy ny lahateny nataon’ireo solontenan’ny atleta malagasy izay tafiditra anatin’ireo fepetra ireo, nahitana an’i Yaelle, mpilalao tenisy, i Tahiry, mpanao fanatanjahantena manana fahasembanana ara-tsaina ary i Marcelia, vehivavy milalao rugby any amin’ny faritra Atsimo. Porofo sahady izany fa tena efa anatin’ny fanatanterahana tanteraka ity drafitr’asa ity.
“Hiova tanteraka ny fomba fijery an’i Afrika, manomboka izao, ka tsy hiady farany intsony fa ho lohany, eo amin’ny fanatanjahantena”, araka ny hafatra goavana nomen’Andriamatoa Minisitra Tinoka Roberto, omaly. Antenaina fa tena hitondra ainga vao ho an’ny Spaoro Afrikanina tokoa, araka izany, ity drafitr’asa ity ary efa hita ho mankato sy resy lahatra avokoa ireo solontena iraisam-pirenena, avy amin’ny Unesco, ny CIO (Comité International Olympique), ny Confejes sy ireo Minisitra marobe.
Ankoatra ny fanokafana ity fivoriambe ity, nisy ihany koa ny fanaovan-tsonia teo amin’ny firenena maraokanina sy i Madagasikara, izay nanaovan’ny minisitra Tinoka Roberto sy ny Ambasadaoron’i Maraoka, sonia, ilay taratasim-piaraha-miasa ho fanatsarana ny fanamafisana ny fahalalan’ny tanora malagasy amin’ny alalan’ny Akademia Nasionaly.